Omeo audit ny tranokalanao | Martech Zone
Imbetsaka isan-kerinandro aho dia sendra ny tranokalan'ny orinasa iray ary manontany tena raha tena ao anaty orinasa izy ireo, na manao orinasa, na azo atokisana hifaneraserana. Ny orinasa dia mampiasa vola amin'ny fisian'ny tranonkala ary tsy tsapany akory fa ny tranonkala ananan'izy ireo dia mety hanondro fa tsy atokisana izy ireo.
Ny fahatokisana dia singa lehibe amin'ny fiovam-po. Tsy maintsy manomboka manontany tena ianao, amin'ireo olona an'arivony mitsidika ny tranonkalantsika, ahoana no tsy ahavitan'izy ireo fiovam-po? Raha ny fifampitokisana no olana, azonao atao ny manisy fanovana kely dia kely izay miteraka valiny tsy mampino.
marika - Ny marika eo amin'ny tranokalanao dia hisy fiatraikany lehibe amin'ny fitokisana na tsia. Betsaka ny orinasa miankina amin'ny logo tsy dia mandroso, sary tsy mifanaraka, ary kopia an-tsoratra tsy dia tsara. Raha toa tapitrisa tapitrisa dolara ny volavolanao, dia hiteraka fahatokisana ireo mpitsidika anao izany. Raha mashup clip art sy sangan'asa Paint farany anao izany dia aza manantena zavatra betsaka.
daty - Manana daty ao amin'ny pejy fandraisam-bahiny sy lohateny na footer mahazatra ve ianao izay tsy misy ankehitriny? Ny © 2009 dia famantarana azo antoka fa tsy nasiam-panavaozana tranokala tao anatin'ny taona vitsivitsy, namela ny mpitsidika hisalasala raha toa izy na tsia. Hamarino tsara fa ny daty voatanisa ao amin'ny pejin'ireo tranonkalanao dia tena vao haingana - lahatsoratra bilaogy, fifandraisan'ny olona farany, gazety farany, ary datin'ny zon'ny mpamorona!
Sary stock - Na dia mampiasa sarin-tahiry ho an'ny mpanjifa saika aza izahay dia manalavitra ny fampiasana sary na tahiry stockphotos izay hitantsika amin'ny tranokala hafa. Raha ny olona tsirairay ao amin'ny tranokalanao dia olona lava volo miaraka amina headset izay ananan'ny orinasa hafa eo amin'ny sehatry ny tranokala, dia mety tsy hoheverina ho loharanom-baovao azo antoka ianao. Raha orinasa ara-dalàna ianao, dia tena mora vidy ny maka sary amin'ny orinasanao ahafahanao manafangaro ny tranokalanao miaraka amin'ny tahiry sy sary tena izy.
Nomeraon-telefaona - Raha hanao raharaham-barotra amin'ny olona iray aho dia tadiaviko ny nomeraon-telefaon'izy ireo. Rehefa tonga amin'ny tranokala tsy manana aho dia matetika mankany amin'ny iray hafa. Na tsia ny valiny amin'ny telefaona dia tsy ny fanontaniana… fa na tsia na tsia ny orinasanao voatanisa ho orinasa manana ny nomeraon-telefaoniny. Ary mbola tsara kokoa ny isan'ny tolotra.
Address - Ny fanomezana adiresy fandraharahana ara-batana dia mampahafantatra ny vinavinanao fa nanambola tamin'ny orinasanao ianao ary mora hita. Misalasala ny hanao orinasa ny orinasa sy ny olon-tsotra… indrindra manerana ny Internet… raha tsy fantatr'izy ireo fa misy fisian'io vatana io any ho any. Ary ny boaty UPS tsy manapaka azy, miala tsiny!
Profiles - Manana ny sarin'ny mpiasanao, ny anarany sy ny andraikiny eo amin'ny tranokalanao ve ianao? Raha tsy izany dia hisarika ny sain'ny mpitsidika anao izy ireo ary mety tsy hanao raharaham-barotra aminao izy ireo satria tsy hahafantatra anao izy ireo. Ny fametrahana sary marina dia tena zava-dehibe - manome endrika ny mombamomba ny orinasanao.
Fiaraha-miasa ara-tsosialy - Miaraka amin'ny sary tena mombamomba anao, manana fifandraisana mitohy amin'ny olona ao amin'ny Twitter sy Facebook ianao. Ny fananana tamba-jotra sosialy mavitrika dia fomba iray lehibe hiantohana ny olona hahita fa azo itokisana ny orinasanao. Ny fandraisana andraikitra sy ny hetsika vao haingana momba ny fifandraisanao amin'ny fiaraha-monina dia manan-danja ihany koa.
Policies - Ny politikan'ny besinimaro na ny fanazavana an-tsoratra momba ny fizotran'ny fandoavam-bola, ny fomba fandefasana ary ny fandefasana dia mametraka fototra izay manome fahatakarana matanjaka ny mpitsidika ny orinasanao. Izany no mahatonga ny tranokala ecommerce hametraka hatrany ny politika famerenana sy ny vidin'ny fandefasana. Tokony ianao koa!
Fanamarinana sy maha-mpikambana - Anisan'ny antoko fahatelo, vondrona indostria ara-dalàna ve ianao, mitazona fanamarinana rehetra, manana fanamarinana avy amin'ny antoko fahatelo, fitakiana fiantohana sns? Ny fanomezana ny mpanjifanao ny fampahalalana ilaina amin'ny fanamarinana sy fanaraha-maso ataon'ny antoko fahatelo dia hampiadana azy ireo. Ireo tranokala ecommerce dia nametraka mari-pankasitrahana avy amin'ny loharano toa TRUSTe ary McAfee filaminana.
Inona avy ireo famantarana hafa momba ny fahaizanao mitoky amin'ny orinasa amin'ny fahitana amin'ny Internet? Inona no azonao ampiana amin'ny audit anao?
Fampahalalana naloa tamin'ny dokambarotra StumbleUpon
Jan 7, 2013 ao amin'ny 9: 03 AM
Vantany vao namaky fifanakalozan-kevitra iray momba ny “© 2009” aho - raha midika izany fa tsy nohavaozina ilay tranokala na tsy niova fanahy iniana mba hampisehoana fa nisy lasa ny orinasa. Betsaka ny hevitra tao fa ny tiako indrindra dia © 2009-2012 ohatra.
Ary tiako ny manampy amin'ny lisitra mailaka miasa ary ampy Momba anay fizarana izay zavatra manandanja ihany koa. Ireo famantarana rehetra ireo dia mety toa tsy dia misy dikany na madinidinika nefa nifanaraka tamin'i Douglas izy ireo dia famantarana iray fa mety tsy azo itokisana ilay tranonkala. Ho an'ny vao manomboka amiko miaraka amin'ny tranokalanay $ earch dia goavana ny andraikitra. Ireo dia antsipirihany be loatra hampiharina mba hahatratrarana fijery azo antoka. Nisafidy ny hampiseho ny tarehin'ny orinasanay izahay ary hametraka ny sarinay koa. Faly aho rehefa mahita an'io fomba io amin'ny tranokala hafa koa.